Luxair Luxembourg Airlines dia manidina any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Luxair Luxembourg Airlines dia manidina any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Jolay 22, 2020
Seranam-piaramanidina Budapestmitohy ny fitomboan'ny renivohitra Hongroà manambara fiaramanidina vaovao iray hafa ho an'ny fahavaratra 2020.
Luxair, ilay mpitondra saina any Luxembourg, dia hanomboka serivisy indroa isan-kerinandro manomboka amin'ny 10 Aogositra ka hatramin'ny 23 Oktobra. Ny tolotra vaovaon'ny mpitatitra dia mihoatra ny manaporofo ny fangatahana eo amin'ireo tanàna roa ireo, miaraka amin'ny fitomboan'ny 77% tamin'ny taon-dasa. Miorina amin'ny rohy ara-barotra matanjaka, fizahan-tany miditra mankany Budapest, ary hanompoana tsara kokoa ny fifamoivoizana Hongariana manan-danja mankany Luxembourg.
Ny fahaizan'i Budapest ao anatin'ny faritra eropeana dia nitombo mihoatra ny 7% tamin'ny taon-dasa. Ny renivohitr'i Hongria dia nanampy làlana vaovao tsy nijanona ho any Eropa tamin'ny taona lasa, anisan'izany i Cagliari, Cork, Lappeenranta, Nantes, Preveza, Rimini, Seville, ary Toulouse, miaraka amin'ireo zotra vaovao amin'ity taona ity ao anatin'izany ny Dubrovnik, Santorini, Varna.
Manome hevitra momba ny fanambaràn'i Luxair, Balázs Bogáts, Lehiben'ny Fampandrosoana Airline, seranam-piaramanidina Budapest, dia nilaza hoe: Nanampy izy hoe: "Mbola misy zotram-piaramanidina hafa sy zotra hafa, ary koa ny fepetra isan-karazany mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpanjifanay, antenainay fa hitombo hatrany ny volan'ny mpandeha."
Ny United Airlines dia manitatra ny takiana sarontava amin'ny seranam-piaramanidina
Ny fizahan-tany any Louisville dia manazava ny fampidirana foko